Ny Xiaomi Mi 9 dia azo aseho amin'ny 20 Febroary | Androidsis
Ny Xiaomi Mi 9 dia haseho amin'ny 20 Febroary: Izay fantatsika momba ny telefaona
Miasa amin'ny smartphone isan-karazany i Xiaomi amin'izao fotoana izao. Ny iray amin'ireo maodely antenaina ho tonga tsy ho ela dia ny Xiaomi Mi 9, ny sainam-pirenena vaovao an'ny marika sinoa. Tamin'ity herinandro ity dia efa nahazo ny data voalohany momba an'ity smartphone ity. Ankoatr'izay dia fantatra fa efa voamarina tany amin'ny firenena sasany. Noho izany dia heverina fa tsy ho ela dia hisy ny fandefasana azy. Manamafy izany ny tatitra vaovao.
Satria toa izany ity Xiaomi Mi 9 ity dia haseho amin'ny 20 Febroary, izay daty mitovy amin'ilay Galaxy S10 y ny finday avo lenta Samsung dia haseho. Na dia tsy manamarina an'io aza ny marika ary milalao ilay fanelingelenana amin'ny famoahana farany azy amin'ny tambajotra sosialy.
Maromaro ireo mpampiditra an-tsokosoko izay nanambara ity daty fampisehoana ity amin'ny ora farany. Ka zavatra tsy maintsy raisintsika izanyNa dia tsy azo antoka 100% aza fa ny marika sinoa dia hanolotra ny sainam-pireneny amin'ny daty mitovy amin'ny fahatongavan'i Samsung avo lenta izay efa nandrasana hatry ny ela. Saingy misy ny mety hitrangan'izany.
Nanambara ny orinasa Xiaomi fa hanafaka ny Xiaomi 9 amin'ny 20 febroary. pic.twitter.com/JbJ3mvbYHV
- Universe dessinée (@UniverseIce) Febroary 13, 2019
Tamin'ity herinandro ity dia nahazo famoahana marobe momba ny Xiaomi Mi 9 izahay. Misaotra azy ireo isika afaka mahazo hevitra mazava momba izay handao antsika ity smartphone an'ny marika sinoa ity. Ambony tampon'ilay faritra, izay tadiavin'ny marika sinoa hanatsara ny fisiany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ity sehatry ny tsena ity. Sehatra iray izay tian'izy ireo hananana ny fahombiazana azon'i Huawei, indrindra amin'ny taona 2018.
Na dia hatreto aza, ny orinasa mihitsy dia mbola tsy nilaza na inona na inona momba ny fampisehoana an'ity smartphone ity. Ny efa navelan'izy ireo tamintsika dia ny fanamafisana fa Any amin'ny MWC 2019 any Barcelona izy ireo manomboka ny 24 febroary. Noho izany, raha toa ka tsy aseho ny Xiaomi Mi 9 amin'ny 20 febroary, dia azo inoana fa ho hitantsika amin'ny hetsika telephony any Barcelona amin'ny faran'ity volana ity. Na dia mbola tsy nilaza an'izany telefaona izany aza ny orinasa dia hatolotr'izy ireo amin'ity hetsika ity. Ny fanamafisana ny fisian'izy ireo ao amin'ny MWC dia notanterahina tamin'ny tambajotra sosialin'izy ireo. Nahavita izany tamin'ny mombamomba azy ireo izy ireo
Manisa ny andro mandra-pahatongan'ny # MWC19
Hevero ny vokatra havoakanay! #Ataovy zary misy pic.twitter.com/dv9NQVUHMQ
- Mi (@xiaomi) Febroary 13, 2019
Ny zavatra fantatsika momba ny Xiaomi Mi 9
Tamin'ity herinandro ity ihany dia nahazo angona vaovao momba ny smartphone izahay. Fantatsika fa efa nandalo TEENA izy, zavatra izay mazava tsara fa akaiky ny fanombohany. Na dia manohy milalao lalao amin'ny zavatra rehetra mifandraika amin'ity fitaovana ity aza ny orinasa. Nianarantsika tsikelikely ny antsipiriany momba izany. Izay mamela antsika hanana hevitra mazava momba ny zavatra antenaina.
Ity Xiaomi Mi 9 ity dia ho avy miaraka amin'ny Fampisehoana AMOLED 6,4-inch miaraka amina vahaolana Full HD + 1080 x 2220 teboka. Pikantsary misy notch, eo anelanelan'ny rano mitete iray sy ny mahazatra. Ao anatin'ny fitaovana dia miandry antsika i Snapdragon 855, ny processeur matanjaka indrindra ho an'ny avo lenta amin'ny Android androany.
Ho tonga miaraka amin'ny fakantsary triple aoriana ilay fitaovana. Ity dia zavatra iray efa amam-bolana no naely izany, nefa toa ho tanteraka ihany izany amin'ny farany. Izy io dia mety ho sensor 48 MP ary MP 12 hafa. Raha ny fahatelo amin'ny sensor dia 3D. Amin'izany no lasa voalohany amin'ny marika sinoa ny manana fakantsary aoriana telo.
Antenaina fa hisy fitambarana RAM sy fitehirizana anatiny maro azo avy amin'ity Xiaomi Mi 9. Iray amin'izy ireo, ilay iray izay hita hatreto, dia RAM 6 GB sy fitehirizana 128 GB. Raha ny bateria, ny finday dia hanana iray 3.500 mAh. Matetika izy io dia mazàna amin'ireo maodelin'ny marika sinoa ireo, tsy misy tsy ampoizina loatra, noho izany.
Farany, amin'ny zavatra fantatsika hatreto, mampanantena fa ho avo lenta, an'ny feno indrindra. Ka tsy maintsy hojerentsika raha amin'ny 20 febroary izao no hihaona amin'ity Xiaomi Mi 9. ity na raha hiandry ny MWC 2019 isika, izay efa nanamafy ny fisian'io orinasa io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Ny Xiaomi Mi 9 dia haseho amin'ny 20 Febroary: Izay fantatsika momba ny telefaona
Darkness Rises dia hetsika RPG lehibe iray mahaliana anao amin'ny findainao